Mayelana NATHI - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
Iyunithi Yokwelashwa Komthombo Womoya
Uchungechunge lwe-B / C
Ama-Value we-Solenoid nama-Valve Womoya
Ama-Valve Mechanical namanye ama-Valve
Izisilinda ze-Twin Rod & Tri-Rod
One Touch nokufaka
Pu Tubes & Isibhamu Somoya
IBLCH Pneumatic Science and Technology Co Ltd yasungulwa ngo-Agasti 2004, itholakala endaweni yezimboni yokuthuthukiswa komnotho i-YUEQING. Le nkampani ihlanganisa indawo engama-24000 ㎡, enezisekelo zokukhiqiza ezi-5 ezinabasebenzi abangaphezu kuka-300. Kuyinto ibhizinisi okungelona lesifunda eligxile ku-R & D, ukukhiqizwa, ukuthengisa kanye nokugcinwa kwensiza yezingxenye zomoya.
Manje sihlinzeka ngemikhiqizo emihlanu yochungechunge lwe-pneumatic, efana nokwelashwa komthombo womoya, ukufakwa kwomoya, amasilinda, ama-valve we-solenoid, amashubhu we-PU nezibhamu zomoya, amamodeli acishe abe yi-100 nezinto eziyizinkulungwane emhlabeni jikelele .sidlulile i-ISO 9001: isitifiketi sango-2015, i-ISO 14001: 2015 isitifiketi sokuphathwa kwemvelo kanye ne-CE markig ye-EU. Futhi siyiNational High-tech Enterprise, inhlangano ekhulayo yamaZinga kaZwelonke.
Sihlala sithatha "ikhwalithi ephezulu" njengento ebaluleke kakhulu, izingxenye eziyisihluthulelo zonke zenziwa ngokucubungula okuzenzakalelayo, okuqinisekisa ngempumelelo ikhwalithi ezinzile yezinto.
Sithatha isikhathi eside ekuhlolweni kwempilo ende futhi siphikelela ekutheni wonke umkhiqizo owodwa kufanele uhlolwe futhi uvivinywe ngaphambi kokulethwa. Okwamanje, "Ngemuva Kwesevisi" ukuzibophezela kwethu, ngoba siyazi ukuthi amaklayenti azosiqonda ngokuphelele isimo sethu sengqondo sokuzibophezela futhi adale isimo sokuwina.
Eminyakeni edlule, sithumele emazweni angaphezu kuka-30 futhi sithola izimpendulo eziningi ezinhle. Ngokuzayo, silindele ukuthi sikwazi ukubambisana namakhasimende amaningi futhi sibe nethuba lokuba yinkampani ehamba phambili emhlabeni. Siyakhula ndawonye nawe.
Lwela ukuba ngumholi embonini yomoya yaseChina
+ Ithimba labaphathi be-R & D
Amagunya obunikazi ahlukahlukene
Ngekhwalithi esezingeni lokuqala, insizakalo esezingeni lokuqala, idumela lokuqala namakhasimende okusebenza ndawonye ukudala ipulani enkulu
Mayelana nokuqasha abantu, inkampani yethu ihlale ilandela umgomo wokuthi “abantu bagxile” futhi inamathela ezindinganisweni zokuqashwa kwabantu “abantu benza konke okusemandleni abo, ubuningi busebenza”. Ekukhetheni noma ekukhushulweni kwamathalente, sihlala sigcizelela ukuthi "abantu abanekhono, abantu abayizicaba," ubudlova "abucabangi izihlobo, abangane, ubudlelwano, ubudlelwano, nezizinda ngenkathi kuqashwa abantu, kepha kugxila ekhonweni langempela labasebenzi , unaka ukusebenza, imfundo elula, ukusebenza kanzima, nobudala obulula, kulandela "ukungakhethi, ubulungiswa, nokuvuleleka." Umgomo wokuncintisana, ubuhle.
Mayelana nokuqeqeshwa kwabasebenzi, sihlola ukusebenza koqeqesho ngezinsizakusebenza ezahlukahlukene zokufunda, ukufundisa nge-CD-ROM, nokuphasa izivivinyo ngemuva kokufunda. Sikhuthaza futhi sigqugquzela abasebenzi abanenkuthalo, futhi siqasha ongoti abazokhulumela abasebenzi.
Ukukhiqiza imikhiqizo ekhuthele Ukudala Ibhizinisi Elinakekelayo
Umsebenzi omuhle Umsebenzi Wokunakekelwa Kokuzikhandla Wokuphathwa Komoya
Cha, 387, Jingba Road, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Ukusekela kwezobuchwepheshe:globalso Hot Products - Ibalazwe